Madaxweyne Al Bashiir oo la sheegay in uu is casilay iyo Dabaal degyo socda Dalka Sudan -
HomeWararkaMadaxweyne Al Bashiir oo la sheegay in uu is casilay iyo Dabaal degyo socda Dalka Sudan
Madaxweyne Al Bashiir oo la sheegay in uu is casilay iyo Dabaal degyo socda Dalka Sudan
Xaalad Milateri ayaa saaka ka jirta magaalada Khartoum ee dalka Sudan, kaddib markii Ciidamada Milateriga ay la wareegeen xarumo muhiim ah, sida Raadiyaha dowladda Xarunta Telefishinka.
Ciidamada ayaa sidoo kale ku sugan xarunta Madaxtooyada, halkaasoo la sheegayo in Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir lagu xanibay.
Garoonka diyaaradaha ayaa sidoo kale saaka la xiray, waxaana xaalada u muuqataa mid gebi ahaanba Ciidamada Milateriga iyo kuwa Nabadsugida isla og yihiin.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Saraakiisha ugu sareysa Ciidamada ay saaka aroortii kulan yeesheen, kana wada hadleen xaalada ay gashay dalka Sudan oo banaan baxyo ka socdeen, waxaana la filayaa inay soo saaraan go’aano.
Dhinaca kale Sida ay ku warantay Wakaalada Wararka ee reuters Madaxweynaha dalka Sudan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa aqbalay in uu xilka ka dego, kadib markii Milatariga dalkaasi saakay ku go’doomiyeen xarunta Madaxtooyada.
Telefishinka iyo Raadiyaha dalka Sudan ayaan wali laga baahin is casilaada Madaxweynaha dalka Sudan, waxaana wali shir xasaasi ah u socdaa Saraakiisha Milatariga oo ka tashanaya go’aankii ay ku dhawaaqi lahaayeen iyo cida talada lagu wareejinayo.
Dabaal degyo ayaa ka socda qeybo kamid ah dalka Sudan oo lagu soo dhaweenayo iscasilaada Madaxweyne Al Bashiir, waxa ayna dadku ku dhawaaqayaan Dowladii Al Bashiir waa dhacday iyo ereyo kale,
Ciidamada Milatariga dalka Sudan ayaa wali heesta xarumo badan oo kuyaala Khartuum ay ku jiraan xarumaha Telefishinka iyo raadiyaha dowlada, waxa ay sidoo kale milatariga ku hareereesan yihiin xarunta Madaxtooyada.
Milatariga ayaa sidoo kale howlgalo baaritaano ah kawada xafiisyada xisbiga talada dalkaasi haya iyo sidoo kale xubno kale oo aad ugu dhawaa Madaxweynaha , waxa ayna xireen Milatariga masuuliyiin aad ugu dhawaa Al Bashiir.
Bilihii la soo dhaafay dibad baxyo looga soo horjeedo Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa ka socday magaalada Khartoum iyo magaalooyinka kale, waxaana dibad baxyadaas xaalada ka dhigtay mid fowdo iyo jahwareer gelisay dalka oo dhan.